Nandrolone Decanoate (DECA) Ndị na-emepụta ntụ ntụ & Ndị na-eweta --lọ ọrụ
Nwunye Nandrolone Decanoate (DECA), nke a makwaara dịka 19-nortestosterone, bụ etrogen na anabolic steroid (AAS) nke eji eme ihe dị ka nandrolone decanoate (aha Deca-Durabolin) na nandrolonephenylpropionate (aha Durabolin) .
Raw Nandrolone Decanoate (DECA) ntụ (360-70-3) video
Raw Nandrolone Decanoate (DECA) ntụ (360-70-3) Nkọwapụta
Raw Nandrolone Decanoate ntụ ntụ bụ doro anya na nke abụọ-kasị mara amara injectable steroid mgbe Testosterone. A na-edepụta ihe a na-emepụta anabolic dịka otu n'ime ọgwụ ndị kachasị mma maka ịnọgide na-enwe ike ịmịkọrọ ahụ ike na agụụ na-akpali akpali. Ngwọrọgwu na-eme ka anarogenic anabolic na-enweta nnukwu anabatara n'etiti ndị ọkachamara na ndị na-eme egwuregwu.
N'ịbụ nke e mepụtara iji zere ndị mmadụ chọpụtara na ọrịa na-egbu ahụ mgbu, Raw Nandrolone Decanoate (DECA) nwere ike ịme ka ọkpụkpụ nke ọkpụkpụ na ịmalite ọkpụkpụ dịkwuo mma. Ojiji nke steroid a ruo oge isii na asatọ ga - ejikọta na mmụba dị ịrịba ama nke mmepụta ọbara ọbara uhie na ịgwọ nsogbu nkwonkwo ndị ụfọdụ ndị na-eme egwuregwu na-eme n'oge nrụgide siri ike. A na-ejikarị steroid a eme ihe mgbe a na-enweta ego ma ọ bụ nke na-adịghị anwụ anwụ ma ọ bụ otu n'ime obere steroid ndị nwere ike iji mee ihe n'oge ma ọ bụ tupu asọmpi ọkachamara.
Raw Nandrolone Decanoate (DECA) ntụ ntụ Smmezi
Product Name Raw Nandrolone Decanoate (DECA) ntụ ntụ
Chemical Aha Nandrolone decylate;19-Nortestosterone 17β-decanoate; 4-ESTREN-17BETA-OL-3-ONE 17-DECANOATE;4-ESTREN-17-BETA-OL-3-ONE DECANOATE;19-NORTESTOSTERONE 17-DECANOATE;19-NORTESTOSTERONE DECANOATE;17BETA-HYDROXY-19-NOR-4-ANDROSTEN-3-ONE 17-DECANOATE
molekụla Fnhazi C28H44O3
molekụla Wasatọ 428.65
Nkịtị Monoisotopic 428.329 g / mol
Mgbu Point 33-37 ° C
esi ebe 483.46 Celsius C (ike siri ike)
Agba White ka ìhè odo crystalline ntụ ntụ
Sume 45% (w / v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 0.8 mg / mL
Antinye N'ịbụ nke e mepụtara iji mesoo ndị mmadụ chọpụtara na ọrịa na-egbu ahụ mgbu, Nandrolone Decanoate nwere ike ịme ka ọkpụkpụ ọkpụkpụ na ogo ahụ dịkwuo mma ma mee ka nkwalite protein dị mma, njigide njigide, arụmọrụ, na ntachi obi.
Kedu ihe bụ Nandrolone Decanoate (DECA) ntụ (360-70-3)?
A na-emekarị ka Nandrolone base na-emepụta site na nwoke mmepụta hormone testosterone. Ọ nwere ike inyere aka rụzie ahụ anụ ahụ, mee ka ahụ na ọkpụkpụ dịkwuo elu ma gbaa ume ka e guzobe ọbara ọbara uhie. O nwekwara ike ime ka uru ahụ na-eto, mmetụ nke agụụ na-eme ka mmepụta ọbara uhie na ọkpụkpụ dị n'ọkpụkpụ. Ọmụmụ ihe ọmụmụ na-egosi na ọ dị irè n'ịgwọ ọrịa anaemia, osteoporosis na ụdị ụfọdụ nke neoplasia tinyere ọrịa kansa, ma na-eme dịka ọgwụ mgbochi progesin. Nandrolone bụ nke a na-erekarị ahịa dị ka ester (Deca-Durabolin) na-adịkarị ala dị ka ester phenylpropionate (Durabolin).
Kedu oke Nandrolone Decanoate (DECA) ntụ (360-70-3) ọrụ
Nandrolone Decanoate (DECA) ntụ ntụ (360-70-3) ojiji
Ejikwala Nandrolone na-emeso osteoporosis n'ime ụmụ nwanyị, dịka usoro ndị ọkachamara na-ahụ maka ndị ọkachamara si egosi. Nandrolone na-eme ka mmekorita collagen dị na ahụ ma weghachite nguzo nke calcium site na ime ka akwara osiri ike. Ejikwala Nandrolone agwọ ọrịa kansa na iji belata ihe mgbaàmà nke ọrịa AIDS, dị ka Wiley InterScience website si kwuo. Ọ na-eme nke a site na-enyere aka igbochi nhụpụ nke anụ ahụ na ike anụ ahụ nke na-emekarị ọrịa AIDS.
Nandrolone Decanoate (DECA) ntụ ntụ (360-70-3) uru
Nandrolone dị irè na ụba olu na njupụta. Ọ na-eme nke a site n'inyere ahụ aka iji ndị na-edozi protein na-arụ ọrụ nke ọma. Mmetụta dị iche iche na-adịru nwa oge ma nri dị oke mkpa na protein dị mkpa iji welie ụda ahụ ike. Nandrolone nwere ike belata oge mgbake site na mmerụ ahụ ma mekwuo ogo ume site n'ibelata ike ọgwụgwụ mgbe ị gbalịsịrị. Ọ na-eme nke a site na ịbawanye ogo nke glycogen muscle mgbe ọchịchị mmega ahụ siri ike. Nke a pụtara na ndị na-eme egwuregwu nwere ike ịzụ oge ruo ogologo oge n'enweghị ike gwụrụ. Ojiji Nandrolone abụghị naanị ngwaahịa a na-ewu ewu n'etiti bodybuilders, mana ọ na-arụ ọrụ nke ọma n'ịgwọ ọnọdụ ahụike dị iche iche. Mmetụta dị mma nke ọgwụ ahụ na-agụnye uto uru ahụ, mmetụ nke agụụ na ụba mmepụta ọbara uhie na ọkpụkpụ ọkpụkpụ. Ọmụmụ ihe ọmụmụ na-egosi na ọ dị irè n'ịgwọ ọrịa anaemia, osteoporosis na ụdị ụfọdụ nke neoplasia tinyere ọrịa kansa, ma na-eme dịka ọgwụ mgbochi progesin.
Zụta Nandrolone Decanoate (DECA) ntụ (360-70-3) si Buyaas.com.
Nandrolone Decanoate Uses, Cycle, Dosage, na akpata oyi
Ọgwụ Anabolic na Medicine Modern, William N. Taylor. MD, peeji nke 75-120
Ọgwụ, Ndị Ngwá Ọrụ, na Ọrụ Ahụ, nke John A. Thomas bipụtara, Page 27-30
Osteoporosis: Pathogenesis na Management, nke RM Francis dere, peeji nke 101-130
1 nyochaa maka Nandrolone Decanoate (DECA) ntụ ntụ (360-70-3)
admin - Nwere ike 6, 2019 :
Ngwaahịa NANDROLONE DECANOATE (DECA) POWDER dị ezigbo uru.